MDC Inoti Yaneta neNhaurirano Dzisina Magumo
Nhaurirano pakati pezvikwata zviviri zveMDC neZanu-PF dzange dzichitarisirwa kutanga manheru eChipiri mushure mekunge vari kumiririra mapato matatu aya, vasangana nenhumwa nhatu dzemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma.
Nhumwa dzaVaZuma idzi dzakaita musangano nemapato ose neMuvhuro, dzakaita zvakare mimwe misangano neChipiri. Vari kumirira MDC iri kutungamirwa naVaMorgan Tsvangirai vanoti havachadi kutaurirana zvisingaperi, uye vave kuda kuti kana paita mangange, nyaya iyi yobva yaendeswa kuSADC kuti igadziriswe.
Zanu-PF iri kuramba yakamira nerekuti kana zvirango zvakatamerwa vakuru vavo zvikasabviswa, haisi kuzobvuma kudududza panyaya yemisariridzwa yezviri kunetsa muhurumende yemushandira pamwe. Asi bato reZanu-PF riri kuramba kuti zvinzi paita mangange sezvo riri kuda kuti varambe vachingotaurirana, uku MDC ichiona kuti yaita kuti zvirango zvabviswe.
Nyaya dzasarira kuti dzigadziriswe inyaya yekugadzwa kwemagavhuna ematunhu mumatunhu akakunda MDC, kugadzwa kwagavhuna webhanga guru renyika, kugadzwa kwemuchuchusi mukuru wehurumende naVaMugabe vasina kunge vasuma vamwe sezvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
VaCharles mangongera inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. VaMangongera vanoti vanhu vemuZimbabwe vave kunetawo nenhaurirano dzisingapere. VaMangongera vanoti zvakakosha kuti zvose zvakawiriranwa zvichiitwa kwete kuti vanhu vakuru varambe vachinetsana nezvinhu zvinogadzirisika nyore nyore.